နည်းပညာဟာသွက်​လက်​​စေလား ဆွံ့အ​စေလား — Steemkr
ဒါဟာလူ့သဘောသဘာဝ, လူ့ဉာဏ်, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာလုံးဝလွတ်လပ်သောဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးဖြစ်နိုင်၏, ကျနော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သမိုင်းသို့မဟုတ်ပင် Pre-သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအတူတူပင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်တဦးတည်းအဆက်မပြတ်လူ့သဘောသဘာဝနှင့်အတူ သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြသလော တခါတရံမှာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာရှင်-သူတွေကိုယုံကြည်ချက်လူ့သဘောသဘာဝကာလကို ပေါ်မှာဤလမ်း fixed ခဲ့သူ။ ငါယခုဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုမှားယွင်းနေသည်ထင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ရှေးခေတ်နည်းပညာများစဉ်းစားကြည့်ပါ: ချက်ပြုတ်။ ရှေးခေတ်မုဆိုးစုဆောင်းသူတို့ရဲ့အသားပစ်ခတ်ကြောင့် tastier စေမယ်လို့မသာပေမယ့်တွေဟာအစာကြေဖို့သူတို့ရဲ့အစားအသောက်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ, ခေါက်-အပေါ်သက်ရောက်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာစားသုံးနိုင်သောယခင်က ခဲ့တိရစ္ဆာန်အသေကောင်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းကို လုပ်. , လည်းပိုရှည်အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်အချက်အပြုတ်ကားသိမြင်မှုအောင်မြင်မှုမသာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အချိန်ပမာဏကိုကျွန်မတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အမဲ, ရှာတွေ့ဖြုန်းခဲ့, သူတို့ရဲ့အစားအသောက် နှင့်အရှင်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းရန်သောကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောစဉ်းစားတွေးခေါ်ကဲ့သို့သောအခြားလှုပ်ရှားမှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ရရှိနိုင်အောင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အသစ်အချိန်, စီစဉ်ဖို့စဉ်းစားရန်နှင့်ဂူ၏နံရံပေါ် နှင့်ကြီးမားသောဆွဲကွာ မှပင်အခြားအပင်ကိုပိုလွတ်မြောက်နည်းပညာများ-သို့မဟုတ်တီထွင်သမိုင်းမလူသားမရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။
နောက်ထပ်ရှေးခေတ်သိမြင်မှုနည်းပညာ, ရေးသားခြင်း, ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်ပါကထင်ရာ '' ရေတွက်တိုကင် '' အဖြစ်အစောပိုင်းဘီစီ 7000 အဖြစ်ကနေစိုက်ပျိုးရေးစတိုးဆိုင်များခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ထံမှဖွံ့ဖြိုးဆဲခြင်း, မြေသြဇာကောင်းသောလခြမ်းန်းကျင်ငါးထောင်ခြောက်မှလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဖြစ်ကောင်းတီထွင်ခဲ့သည်။ အောက်ပါထောင်စုနှစ်ကျော်, အရေးအသား၏ကိုအသုံးပြုယင်းကျယ်ပြန့် (နှင့်မမြင်နိုင်တဲ့) အချို့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏လုံးဝအသစ်သောပုံစံများ, ဒါပေမယ့်သိမှတ်ခံစားမှုအသစ်များ Modes သာမယ့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဘာမှမပါလျှင်စာအရေးအသားဟာမှတ်ဥာဏ်နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ မှတျတမျးတငျထားနောက်မှစိတ်ကိုမှယူဆောင်နိုင်ရာတစ်ခုခုမှယခုအချိန်တွင်၏ခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကနေပြောင်းရွေ့အဖြစ်-အထူးသဖြင့်ရှေးဂရိနိုင်ငံ-အတွေးထဲမှာရေးသားခြင်း (နှင့်စာဖတ်ခြင်း) ကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်နှင့်ငုပ်လျှိုးနေသိမြင်မှုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ စာအရေးအသားမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ကအတွေးများကိုတည်ငြိမ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပိုမိုထိရောက်စွာအတွေးများကိုဝေမျှနှင့်အထူးသဖြင့်အတှေးအဝေဖန်ကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့်အခြားသူများ၏နှစ်ဦးစလုံး။ အရေးအသားလည်းတစ်ခုကြားမှာလမ်းအတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်ငြင်းခုံ၏ရှည်လျားသောသံကြိုးထုတ်လုပ်ရန်နှင့်နောက်လိုက်ဖို့နိုင်စွမ်းအားကောင်းလာခဲ့သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို (ယနေ့ပလေတိုရဲ့ဆွေးနွေးမှုများကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှသင့်ရဲ့, iPod ပေါ်မှာနားထောင်ရန်နှင့်အရှင်ရှေးနှင့်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်) စက္ကန့်နှင့်မိနစ်ကနေရက်သတ္တပတ်များနှင့်နှစ်, ထာဆင်ခြင်၏ ထွက်ဆွဲကူညီပေးခဲ့သည်။ စာအရေးအသားကိုအစဉ်အဆက်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည် နှင့် ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အတော်များများကယနေ့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်း၏အချို့ပုံစံများကိုသာတကယ်အရေးအသားအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းခဲ့ကြဘို့ကျနော်တို့ယူစိတ်ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အူအထင်ပါတယ်။
esteem technology smart life